Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa ọchụchọ akwụ ụgwọ na-arụkarị site na ịchekwa isiokwu ụfọdụ ndị ọrụ na-achọ na, mgbasa ozi Facebook dabere na ịchọta ndị na-ege ntị nwere ike ịghọ onye ofufe gị ma ọ bụ onye ahịa gị. Nhọrọ ndị a ezubere iche na-elekwasị anya na ndị ọrụ na profaịlụ ndị ahịa nwere ike iji pịa ma bulie azụmahịa gị. Mary Lister, WordStream
Ọnọdụ - Ebumnuche ebe a na-enye gị ohere ịbịaru ndị ahịa isi ebe site na mba, steeti / mpaghara, obodo na koodu zip. Ozi ọnọdụ sitere na ọnọdụ onye ọrụ kwuru na usoro iheomume ha ma adaba adreesị IP ha (Usoro Internetntanetị). Nwere ike ịchọta site na okirikiri ma wezuga ọnọdụ.
Ndị na-ege ntị omenala - Zube ndị ahịa gị ugbu a site na ị bulite ndepụta ịkpọtụrụ ndị ịchọrọ ịbịaru.